yenza ingxubevange target
Alluter Technology (Shenzhen) Co., Ltd yenye eziphambili abenzi ekujoliswe meko e-China. Yasungulwa ngo-2007 kwaye ukwanda ngokukhawuleza ukuba inkampani iqeshe abasebenzi 200 dibanisa eziya yikomiti yolawulo onamava.
Kukho iziseko yemveliso Five phantsi inkampani yethu ngokupheleleyo-asethi (Plasma ukuspeyita Factory, wezaBasebenzi-olunzulu Machine Ukuvelisa Factory, Research and Development Centres, ezinkulu Non-standard ukuvelisa Factory, eliyinjubaqa Material Factory) .Giving umdlalo kuyo yonke imisebenzi yenkampani yethu ngayo izinto ezahlukeneyo ukufikelela ikhonkco inkqubo link kakhulu yobungcali, ezifikelela kuzo zonke iinkalo zemveliso target.
ALLUTER uyakwazi ukunikeza le metal arcade games olunqabileyo kunye neethagethi zesinyithi non-ayoni, ezahlukeneyo ekujoliswe ingxubevange eziphathekayo, iithagethi yodongwe, ibe luthuthu granule ekujoliswe, eziphambili ziquka Cr, Ti, uJesu, Si, Sn, C, ITO, NiCr, khe, SiAl , Cr + Cu yesondo, ngaphandle, likhuphe metallization ekujoliswe kunye nenkonzo semali.
ALLUTER imi emva iimveliso zabo, iimveliso zayo certified kakuhle SGS, MSDS, RoHs, ngumnqantsa USA Market, Aisa Market, kunye yaseYurophu Market.
Iinjongo ze nkampani ALLUTER i makanikelwe iklasi yokuqala iimveliso ekujoliswe meko kunye nenkonzo anelisekile kubathengi balo abaxabisekileyo, makhe yobungcali ukuba abathengi amaxabiso.
Kholwani ALLUTER target meko iya kuba ukhetho lwakho lokuqala meko umboneleli ekujoliswe!
Alluter Ukwanda isicwangciso Igunya 2017-2018
Alluter nkampani ukwandisa amandla rotary imveliso ekujoliswe sentambo Okt 2017. yokwandisa izikolo iya kwandisa umthamo nge-80% ngo-Guizhou mveliso. Abasebenzi abandisiweyo iya kwenza Alluter ukuxhasa ngokukhawuleza g ...